သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): အဲဒါ.. ရှင့်ကြောင့်
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 22:45
Friday,9December 2011 at 23:07:00 GMT
အွန် ..စောင်းများပြောသလားကိုရင်ရေ ဒီလူကြီးတော့း)
Friday,9December 2011 at 23:48:00 GMT
ကိုရင် နဲ့ မဒမ်ကိုး ကွန်မန့်ကြောင့်ရော
Saturday, 10 December 2011 at 00:31:00 GMT
နာမည်လေးတွေတာနဲ့ သဘောကျတယ်၊ ခုက ကိုရင်တို့ မဒမ်တို့ ခေတ်ပေကိုး။။။
Saturday, 10 December 2011 at 01:58:00 GMT
Saturday, 10 December 2011 at 06:09:00 GMT
Saturday, 10 December 2011 at 07:13:00 GMT
အဲဒီလိုကြီးလား...ကိုရင်နဲ့မဒမ်ကို သေသေချာ ချာမေးကြည့်ဦးမှ...
Saturday, 10 December 2011 at 07:50:00 GMT
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြီးမင်းကတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုယ်ချင်းစာမလဲနော်
အော် အချစ်မရှိတဲ့သူတွေများ သနားလိုက်တာ
တစ်ခုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူတို့အကြောင်းလေး ကမ္ဘာကသိသွားတာပေါ့ သူကြီးမင်းကျေးဇူးနဲ့
Saturday, 10 December 2011 at 07:53:00 GMT
တိန်.......... ကိုရင်နဲ့မဒမ် ဟိုမှာ ထရိုက်ကုန်ကြပြီ ကိုရင်တဂျီးမင်း။ :P
Saturday, 10 December 2011 at 09:02:00 GMT
ဟိဟိဟိ.. ကိုရင်နဲ့ မဒမ် သူကြီးမင်းလုပ်ပေးလိုက်မှ မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ဖြစ်တော့တယ် အဟိ :P :P
Saturday, 10 December 2011 at 10:51:00 GMT
Saturday, 10 December 2011 at 10:54:00 GMT
တဲ့ ဟိုကိုရင်နဲ့ မဒမ်တို့များလား....:P
Saturday, 10 December 2011 at 11:47:00 GMT
Saturday, 10 December 2011 at 11:48:00 GMT
Saturday, 10 December 2011 at 16:53:00 GMT
အင်းး မဟုတ်မှ လွဲရော .. ဂြိုလ်ထုနဲ့ သူကြီး တခုခုတော့ ပတ်သတ်ရမယ် .. :P
Saturday, 10 December 2011 at 17:32:00 GMT
မဒမ်ခမျာ သားဦးကိုယ်ဝန်ဆိုတော့လည်း ဘုမသိဘမသိနဲ့ အတော်အနေခက်ပေမပေါ့...ဗိုက်နာတာကိုတောင် မခွဲတတ်ရှာတော့ဘူးကိုး...မွေးချင်လို့၊ ကလေးဆောင့်လို့နာတာက တစ်မျိုးလေ...အင်အင်းပါချင်လို့နာတာက ရစ်ပြီးနာတာနဲ့ ထိုးပြီးနာတာကိုး...
ဂြိုလ်တုနဲ့တွေ့လိုက်မှပဲ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေး မှတ်ထားဦးမှ...လူနာလာရင် ပြောရအောင် ဟာသလေး တစ်ခုတော့ ရပြီ...ဒါပေမယ့် ခက်တာက ဆေးခန်းမှာ သောက်တဲ့ဂြိုလ်တုမရှိဘဲ...ဟိုဒင်းထဲထည့်တဲ့ ဂြိုလ်တုလေးတွေပဲ ရှိတာ ခက်သပေါ့ သူကြီးရယ်...
Sunday, 11 December 2011 at 01:37:00 GMT
Sunday, 11 December 2011 at 03:11:00 GMT
ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဟိုအတွဲကို သတိရလိုက်တယ်
သူတို့ကိုများ စောင်းရေးသလားလို့လေ :P :P
သူဂျီးတို့များ ရေးလိုက်ရင် ရွှင်စရာ ပြုံးစရာတွေနဲ့
Sunday, 11 December 2011 at 03:33:00 GMT
အော် ဒီတဂျင်းမီးကလူပြိုဂျီးမို့ထင်တယ် ဖိုမကိစ္စ သံဝါသတွေ မပါရင် စာမရေးတတ်တော့ဘူးလား။ သူများကိုအားကျရင်လဲ မိန်းမယူလိုက်ပေါ့။ ခုတလော တွေ့နေရတာ >.<
Sunday, 11 December 2011 at 05:03:00 GMT
သူကြီးမင်း မိန်းမ ဗိုက်နာရင်
အဲ့လိုပဲ ဂြိုလ်တု တိုက်လိုက်နော် .. :D
Sunday, 11 December 2011 at 10:25:00 GMT
သူကြီးမိန်းမ ဘိုက်နာရင်ြ၈ိုဟ်တုမတိုက်နဲ့
Sunday, 11 December 2011 at 15:42:00 GMT
Monday, 12 December 2011 at 03:58:00 GMT
အော် သူကြီးမင်းပျောက်လှချည်လား မှတ်တယ်။
လက်စသတ်တော့ ကိုရင်နဲ့မဒမ်တို့အကြောင်း သွားရောက်လေ့လာပြီး မှတ်သားနေတာပါလား။
ဆေးမြီးတို စုဆောင်းနေပုံရတယ်း))
Monday, 12 December 2011 at 09:50:00 GMT
သူကြီးမင်းကျေးဇူးကြောင့် သူတို့တွေအကြောင်းသိသွားပြီ..:):) ...
Monday, 12 December 2011 at 21:43:00 GMT
ဟင်...ဟိုဗိုက်ထင်နေတာ ခုတော့ ဟိုဗိုက်ကြီးး သူကြီးလူဇိုးပဲဗျ ။
Tuesday, 13 December 2011 at 05:45:00 GMT
ကိုယ်တွေ့ကြုံမှ သိရတဲ့ အဖြစ်လေးတွေလည်း ရှိမှာပါ ...
Tuesday, 13 December 2011 at 12:09:00 GMT
အဲဒီမှာရေ ဂြိုဟ်တု ၀မ်းပုပ်ချဆေး ရှိရဲ့လား။
Tuesday, 13 December 2011 at 22:34:00 GMT
Wednesday, 14 December 2011 at 03:24:00 GMT
ရောက်တာနောက်ကျသွားလို့ သူများနောက်မှ ရယ်ရတာပေါ့။ ကွန်မန့်တွေ မဖတ်ခင်အထိ သူကြီးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်း မှတ်နေတာ။ အင်းလေ...နောက်တော့လည်း ဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...း)
Wednesday, 14 December 2011 at 04:30:00 GMT
တယ်ဂျီး ကိုရင်နဲ့ ဒမ်ကိုးအကြောင်းရေးထားတာလား တိုက်ဆိုင်ထှာလား မောင်ဘကြိုင်တို့က အကောင်လိုက်ပြမှ အရိပ်မြင်ချင်တာနှော်ဗျာ
ရှင်းရှင်းလုပ်း)း)
ဒါထက် ၂၀၁၂ လာတော့မယ် ဘယ်တော့လဲ
ကိုဇော်တောင် ဖိတ်စာဝေတော့မယ်ဆိုလားပဲ ကြားနေတယ်း)း)
Wednesday, 14 December 2011 at 15:09:00 GMT
Sunday, 18 December 2011 at 06:17:00 GMT
ဪ.. ၁၀ လ အကြာ မှာမှ ဗိုက်နာ တယ် ဆို တော့..“ ကိုဝင်းကြည်”ကြောင့်လို့ထင်နေတာ.. ခုတော့ ခုတော့...
အထင်နဲ့ အမြင် တက်တက်စင်အောင် လွဲပါရောလားးးး))
Thursday, 22 December 2011 at 04:58:00 GMT
ကိုကိုမောင် နော် စာရေးရင် စောင်းစောင်းမရေး နဲ့ တည့်တည့်ရေး
နောက်မှ ဖတ်စရာတွေ ပြန်လာဖတ်အုန်းမယ်
Thursday, 22 December 2011 at 15:09:00 GMT
cheap essay custom writings said...
The war is the most terrible invention of human evil genius. I guess, no human can see so much horror as I have seen during the war cheap essay custom writings
Tuesday, 8 January 2013 at 14:34:00 GMT